एभरेष्ट बैङ्क लि. | गृहपृष्ठ
Home लगानी एभरेष्ट बैङ्क लि.
एभरेष्ट बैङ्क लि.
मुख्य कार्यालय : लाजिम्पाट, काठमाडौं
स्थापना : सन् १९९४
अध्यक्ष : विष्णुकृष्ण श्रेष्ठ
सीइओ : पीके मोहपात्र
शाखा कार्यालय : ४४
संस्थापक शेयर : ५० प्रतिशत
पञ्जाव नेशनल बैङ्क : २०
पञ्जाव नेशनल बैङ्क र नेपाली लगानीकर्ताहरूको संयुक्त लगानीमा सन् १९९४ देखि यो बैङ्कले वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, यस बैङ्कले देश तथा विदेशका विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आन्तरिक तथा बा⋲य विप्रेषण सेवा पनि दिइरहेको छ । सन् २००६ मा ‘बैङ्क अफ दि इयर’ बाट सम्मानित भएको यो बैङ्क नेपालका अग्रणी वाणिज्य बैङ्कहरूमा गनिन्छ । गतवर्षयस बैङ्कले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई ३०/३० प्रतिशत नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आव ०६७/६८ का लागि यसले लगानीकर्ताहरूलाई ५० प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने निर्णयगरेको छ । विगत २ वर्षमा लगातार ३०/३० प्रतिशत बोनस र नगद लाभांश वितरण गरेको यो बैङ्कले यस वर्षभने प्रतिफलको संरचना परिवर्तन गरेको छ ।
यो कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा अहिले यसको शेयर न्यूट्रल जोनमा रहेको देखिन्छ । हाल यस बैङ्कको शेयरमूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखा स्केल ५० को हाराहारीमा रहेकाले न्यूट्रल जोनमा देखिएको हो ।
सन् २०१० नोभेम्बरदेखि हालसम्म यो कम्पनीको आरएसआई रेखा गत अगष्ट महीनाको शुरूमा एकपटक ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको थियो । साथै, त्यस अवधिमा यसको आरएसआई स्केल ६४ भन्दा माथि जान सकेको छैन । आरएसआई रेखाले वनाएको डब्ल्यू सङ्केतले यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा थप सुधार आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफल दर पनि सार्वजानिक गरेकाले यस बैङ्कको शेयर विक्री गर्नेहरूले केही समय पर्खनु उपयुक्त हुन्छ भने खरीदकर्ताहरूले केही कारोबार अवलोकन गरी खरीद गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
आव ०६७/६८ को चौथो त्रैमाससम्म यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी परिवर्तनीय अग्राधिकार शेयरसहित रू. १ अर्ब २७ करोड रहेको छ । साथै आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कले रू. ९३ करोड १३ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको भन्दा ११ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी सो अवधिमा बैङ्कको जगेडा कोष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा ६२ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. २ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ ।
अहिले बैङ्कको जगेडा कोष चुक्ता पूँजीभन्दा लगभग ८५ प्रतिशत धेरै छ । जगेडा कोषमा देखिएको वृद्धिका आधारमा यो बैङ्कले उच्च नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णयगरेको देखिन्छ । साथै, गत आवमा यो बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानी ५४ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. ७ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ भने ऋण प्रवाह पनि १२ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ३१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।
वार्षिक शेयर कारोबार गतिविधि :
• यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्राय: सधै कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि केही समस्या पर्दैन । यसले कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो चाहनाअनुरूप यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न वा बजारबाट बाहिरिन सक्छन् । त्यसैगरी, शेयरमूल्यमा आइरहने उत्तारचढावको अवस्थाले सट्टेवाजहरूले यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी सामान्य मात्रामा नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
• अन्य समकक्षी वाणिज्य बैङ्कहरूको तुलनामा यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा खासै उत्तारचढाव आएको देखिँदैन । गतवर्षको अवधिमा अधिकांश कम्पनीहरूको शेयरमूल्य उच्च अङ्कले घटे पनि यो बैङ्कको शेयरमूल्य खासै
घटेको छैन ।
• विगत २ वर्ष३०/३० प्रतिशत नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण गरेको यो बैङ्कले यस वर्षकम बोनस शेयर वितरण गर्ने बताएको छ । यसले उच्च प्रतिफलको आशा गरेका लगानीकर्ताहरूमा केही निराशा देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
• विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षबैङ्कका वित्तीय परिसूचकहरुमा राम्रै सुधार भएको देखिन्छ । चुक्ता पूँजीको तुलनामा बैङ्कको खुद मुनाफा दर उल्लेख्य वृद्धि भएकाले मूल्य-आम्दानी अनुपातमा राम्रो सुधार भएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको लागि यो बैङ्कको शेयरमा लगानी करीब ३-४ महीनासम्म प्रतीक्षा गरेमा राम्रो प्रतिफलको सम्भावना देखिन्छ ।